क्रिकेटरको चिया गफ : के अब हामी हलो जोत्‍न जाने? - रमाइलो नेपाल डट कम| Ramailoo Nepal
You are at:Home»अन्तरवार्ता»क्रिकेटरको चिया गफ : के अब हामी हलो जोत्‍न जाने?
By Ramailoo Nepal on	 September 1, 2017 अन्तरवार्ता
– घरभित्रै कुरा मिल्दैन भने अरूले गरिदिएन भनेर भन्नु मूर्खता हो ।
– नेटमा अभ्यास गरेरमात्रै ब्याटिङमा सुधार हुँदैन ।
– कडा परि श्रम गर्दासमेत राष्ट्रिय टोलीमा पर्नबाट चुकेका खेलाडीले खर्चेको समयको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
– नेपाली क्रिकेट भनेर राष्ट्रिय टोलीका १२ वा १४ जना खेलाडीलाई मात्रै बुझेर हुँदैन ।
– निजी क्षेत्रले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताले देशभित्र क्रिकेटलाई मर्न नदिए पनि त्यसले नेपालको क्रिकेट विकासमा भने खासै योगदान पु¥याएको छैन ।
– निजी क्षेत्रले टीट्वेन्टी प्रतियोगितामात्रै आयोजना गरेका छन्, हामीलाई चाहिएको त एकदिवसीय प्रतियोगिता हो ।
– हामीसँग क्रिकेटको क्यालेन्डर नै छैन । यसले राष्ट्रिय टोलीमा परेका र बाहिर रहेका खेलाडीबीच ठूलो खाडल ल्याएको छ ।
– महिला क्रिकेट सुरु भएको १० वर्ष भयो होला तर अहिलेसम्म महिला क्रिकेटको स्कुल प्रतियोगिता पनि हुँदैन । हामी माथिल्लो एउटा उपलब्धि हेरेर मक्ख परेर बस्छौं । सिनियर पुरुष क्रिकेटलाई मात्र हेरेर महिला र उमेर समूहका सबै क्रिकेट बिर्सिएका छौं ।
– रणजी ट्रफी होइन, बिहारको लिगमात्र खेल्ने वातावरण मिल्ने हो भने पनि हाम्रो क्रिकेट धेरै माथि पुग्छ ।
– हाम्रोमा सिस्टम भइदिएको भए खेलाडीहरूले यसरी बोल्नु पनि पर्दैन थियो होला । सिस्टम नहुँदा हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी बोल्दा कुनै न कुनै पक्षलाई त असर पर्ने नै भयो, जसलाई असर पर्छ उसले त भन्ने नै भयो नि खेलाडीले राजनीति ग¥यो भनेर ।
– मैदानबाहिर खेलाडी निराश छन् । खेल सकिएपछि कहिलेकाहीँ ठट्टा पनि हुन्छ— केही अब हलो जोत्न जाने भन्छन्, केही अब विदेश जाने भन्छन् । यद्यपि यो कुरालाई अझै पनि टोलीमा हावी हुन दिएका छैनौं ।